Cabdisalaam Hadliye, wasiirka Arrimaha Dibedda Soomaaliya
Somalia ayaa sheegtay in weerarka safaaradda Sacuudiga uu jabinayo heshiisyadii caalamiga ahaa ee dhinaca diblomaasiyadda ee 1961-kii.
War murtiyeed maanta ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Somalia ayaa lagu cambaareyey weerarkii shalay lagu qaaday safaaradda dalka Sucuudiga ee magaalada Tehran iyo dhismaha qunsuliyadda dalkaas ee magaalada Mash-had ee dalka Iran.
War murtiyeedka ayaa lagu sheegay in xadgudubkani uu jabinayo heshiisyadii caalamiga ahaa ee dhinaca diblomaasiyadda ee sanadkii 1961-kii lagu gaaray magaalada Vienna, heshiiskaas oo faraya ilaalada xarumaha iyo shaqaalaha diblomaasiyadeed.
War murtiyeedkan ka soo baxay Wasaaradda Ariimaha Dibadda ee Somalia ayaa sidoo kale lagu sheegay in Somalia ay boqortooyada Sucuudiga ku garab taagan tahay dhamaan hawlgalada ay kaga hortagayso argagixisada, isla markaana ay Somalia ku garab taagan tahay adkeynta amniga iyo xasiloonida ay boqortooyadu ka wadda dalkeeda gudihiisa iyo gobolkaba.
Somalia Oo Billowday Olole Af-Soomaali
Al-Shabaab Oo Weerar Ku Galay War-Maxan